कैलाशका कथा र किंवदन्ती | Ratopati
personअशोक सिलवाल exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १२, २०७५ chat_bubble_outline0
जुटलपुक ब्युँझिसकेको थियो । तर, ऊ गुम्बाजस्तै शान्त थियो ।
हामीले कैलाश कोरालाई बिहानैदेखि कन्टिन्यु गर्यौँ । लक्ष्य फत्ते गर्ने मनोविज्ञानले राम्ररी काम गरेको थियो । ‘दार्चेन पुगेपछि पवित्र कैलाश कोरा पुरा हुनेछ’, भनेर यात्रीहरू हौसिएका थिए ।
हामीले जम्माजम्मी १५ किलोमिटर जति हिँडे पुग्थ्यो । बाटोमा उकालो ओरालो पनि खासै थिएन । सन्तुष्टि र उत्साहमा सजिलोपन थपिएर यात्रीहरू मख्ख थिए ।
कैलाश कोराको चौथो दिन । दुई रात देरापुकमा बसेकाले चौथो दिन सरासर हिँडेको भए कैलाश कोरा तीन दिनमै पूरा हुन्थ्यो । दिनको के हिसाब गर्नु र ? कैलाश कोरा पूरा गरेर हिसाब गरेर साध्य नलाग्ने खुशी जो प्राप्त गर्दै थियौँ ।
अलि ओर आइपुग्दा एउटा सानो फुच्चे साइकल चलाउँदै थियो । छेउमा एउटा घर थियो । सायद साइकलवाला फुच्चेको घर थियो त्यो । याक र घोडाहरू त बाटाभरि कति थिए कति तर निकै दिनपछि पहिलो पटक मैले साइकल देखेको थिएँ । सामान्य भए पनि मलाई त्यो दृश्य विशेष लाग्यो ।
अझ नदीको किनारमा त्यसभन्दा पनि विशेष दृश्य देखियो । तीनवटा घोडाहरू साथीजसरी सँगै थिए । त्यसमध्ये एउटा घोडाले चमत्कार गर्दै थियो । ऊ बङ्लङ्ग लड्यो र उत्तानो परेर लडीबुडी खेलिरह्यो । अरू दुई घोडाले पनि उसकै सिको गरे । म हेरेको हेरै भएँ । खासमा घोडाले आराम गर्ने तरिका रहेछ त्यो ।
बाटोमा यात्रीहरू कैलाशका अनेक कथा र किंवदन्ती सुनाउन तँछाड मछाड गर्दै थिए । एक यात्री भन्दै थिए, ‘कैलाशको भित्तामा मैले मेरा जीवनका कथाहरू पढेँ ।’
अर्का यात्री भन्दै थिए, ‘साक्षात् शिवको नै दर्शन पाएँ ।’
‘मैले पार्वती माँको दर्शन पाएँ’, एउटीले भनिन् ।
‘मैले गणेश र उसको वाहन मुसा देखेँ’, अर्कीले थपिन् ।
‘मैले कुमारको वाहन मयुर देखेँ’, अर्कोले सुनाए ।
‘मैले डमरु पो देखेँ’, अर्कीले सुनाइन् ।
अर्को भन्दै थिए, ‘मैले चाहिँ त्रिशूल देखेँ’ ।
‘मैले झलझलाकर शिवलिङ्ग देखेँ’, झन् अर्काले थपे ।
यात्री सुयसले उनीहरू सबैको भन्दा भिन्न अनुभव सुनाए, ‘मैले त केवल कैलाश देखेँ र म खुशी छु, मैले यो यात्रा गरेँ ।’
कैलाश भन्नु मूलतः कैलाशको नर्थ फेस हो । विश्वमा कैलाशको जो इमेज छ, त्यो कैलाशको नर्थ फेस नै हो । दुई नाङ्गा फुस्रा पहाडका बीचमा चट्ट परेको अद्भूत कैलाशको नर्थ फेस । जसलाई हामी गुगल गर्दा र युट्यव खोल्दा त्यही दृश्य प्राथमिकतामा देख्न सक्छौँ ।
‘यो नर्थ फेस भन्ने सबै चीज नै पपुलर हुन्छ कि क्या हो ? कैलाशको नर्थ फेस मात्र होइन, नर्थ फेस ब्रान्डका ज्याकेटलगायत ट्रेकिङ गियर पनि पपुलर छ’, मैले हाँस्दै भनेँ ।
रिबोक, नाइक, एडिडास, रेबन आदि हुँदै नर्थ फेससम्मको विभिन्न ब्रान्ड मैले सम्झिएँ । तीमध्ये ठमेलमा नर्थ फेस मात्र नभएर नर्थ फेसका नाममा नर्थ फेकको बजार निकै मौलाएको साथीहरूले बेलाबेला चर्चा गर्ने गरेको सम्झे । ठमेलमै किनेको मैले लाएको ज्याकेट नाम मात्रको नर्थ फेस थियो वा त्यो नर्थ फेस नभएर नर्थ फेक थियो तर कैलाशको नर्थ फेस ओरिजिनल थियो । त्यो भव्य थियो तर त्यसबारे पनि विभिन्न अड्कल, अनुमान र आख्यान सुनेको थिएँ ।
‘कैलाश आदि मानवद्वारा निर्मित अद्भूत दरबार हो । त्यहाँभित्र अहिले पनि आदि मानव आफ्नै सभ्यतासहित बाँचिरहेका छन्’, एक जनाले किंवदन्ती सुनायो ।
उसले कथालाई अझ अगाडि बढायो, ‘एक पटक एकजना यात्री देरापुक आइपुग्यो । मध्यरातमा कैलाशतिरबाट आएको ठूलो असाधारण आवाजले ऊ ब्युँझियो । बाहिर आएर हेर्दा केही देखेन । त्यसपछि ऊ एउटा निष्कर्षमा पुग्यो, सजीव कैलाशभित्र विचित्रको एउटा अलग दुनियाँ छ । त्यसमाथि महान शोध हुनुपर्छ ।’
अर्कोले थप्यो, ‘होइन, यो त प्रकृतिको अद्भूत सिर्जना हो ।’
अर्कोले भन्यो, ‘हो, हो, प्रकृतिमा आदिकालदेखि रहँदै आएको शिवशक्तिस्वरूप हो ।’
अरूले अनेक अनेक भने । जस्तो,
– यो ऊँ पर्वत हो । शिरबाट हिउँ बग्यो भने त्यहाँ ऊँ देखिन्छ ।
– यो स्वर्गको सिँढी हो ।
– यो ज्ञान र शक्तिको केन्द्र हो ।
– यो जीवन्त पर्वत विश्वस्तम्भ हो ।
– यसका चारै दिशा फरक माणिक माणिक्यबाट बनेका छन् ।
– आजसम्म कोही पनि चढ्न नसकेको यो पर्वतभित्र सप्तऋषि निरन्तर तपस्यारत छन् । अरू थुप्रै महान साधक पनि अहिले यहाँ तपस्या गर्छन् तर हामी तिनलाई देख्न सक्दैनौँ ।
– तिब्बतको पश्चिम–दक्षिणी भूभागमा अवस्थित कैलाश (६७१४ मिटर) हिन्दु, बौद्ध, बोन र जैन गरी चार धर्मावलम्बीको महान तीर्थ अर्थात तीर्थहरूको पनि तीर्थ महातीर्थ हो । त्यति मात्र होइन, यो देवता र दानव दुवैको आस्थाको केन्द्र हो । मानवको त नहुने कुरै भएन ।
–कैलाश र मानसरोवरको गर्भमा मुक्तिचक्र छ । महावीरले मानसरोवर क्षेत्रमा तपस्या गरेर मोक्ष प्राप्त गरे । सिद्धार्थलाई जन्माउनुअघि माता मायादेवीले मानसरोवर स्नान गरेकी थिइन् । रामायणमा उल्लेख भएअनुसार सयौँ वर्ष लगाएर पनि कैलाश र मानसरोवरको पर्याप्त र उचित व्याख्या गर्न सकिँदैन ।
– कैलाश पर्वत आत्माको अन्तिम गन्तव्य र अध्यात्म केन्द्र हो ।
– साहस र आस्था दुवै भएपछि मात्र यो यात्रा गर्न सकिन्छ । कैलाश परिक्रमा गर्नु साक्षात शिवलाई प्राप्त गर्नु हो ।
– कतिले भनेका छन्, कैलाशको १ सय ८ परिक्रमा गरे जीवन–मृत्युको चक्रबाट मुक्ति पाइन्छ, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ । कैलाशको एक पटक मात्र परिक्रमा गरे पनि जीवन धन्य हुन्छ र जीवनका समग्र पापबाट मुक्ति मिल्छ ।
– दुनियाँको केन्द्र हो, ६ पर्वतमालाले घेरिएको यो पर्वत ।
यात्रामा रहस्यमयी कैलाशबारे यस्तै यस्तै अनेक कल्पनाख्यान चलिरह्यो । सुन्दा पनि छुट्टै ऊर्जा र आस्था उत्पन्न हुन्थ्यो ।
खरायोजस्ता मुसा र अनेक प्रजातिका चराहरू हाम्रै छेउ डुलिरहेका थिए । बाटाभरी सिस्नुका बोटमा निकै मोटा र छोटा खालका पातहरू थिए । आकाशभन्दा माथि देखिने गोरेटोमा हिँड्दै किचेन ब्वाइले भन्यो, ‘सिस्नुको सुप निकै तागतिलो हुन्छ । खाने हो ?’
यात्रामा त्यो अवसर भने कहिल्यै जुरेन । खाने भन्दाभन्दै यात्रा सकिँदै थियो । त्यो तागतिलो परिकार चाख्ने धोको अधुरै रहे पनि कैलाश कोराका क्रममा देखिएका तिब्बती चरा, चौंरी, घोडा, मुसा, पुतलीहरू मीठा सम्झना बनेर मेरो मनमा सदा सदा बसिरहने छन् ।
बाटोमा धुलो र धुवाँ थिएन । वातावरण प्राकृतिक थियो तर पनि मैले मास्क लगाएको थिएँ । मास्कले त्यहाँको सिरेटोको चिसो छेकेको अनुभव भइरहेको थियो ।
हामी लगातार हिँडिरहेका थियौँ । एउटा हातमा बोरा र अर्को हातमा फोहोर उठाउने अंकुशे स्टिक बोकेकी बाटो सफा गर्ने तिब्बती केटी भेटिई । कैलाशमार्गको सफाइमा आधिकारिक रूपमा खटिएकी ती केटीले टाउकोमा ऊनको टोपी र मुखमा मास्क लगाएकी थिई । ऊ तिब्बती परिहनमा निकै खुलेकी पनि थिई ।
अलि अगाडि पुग्दा एउटा हातमा लौरो र अर्को हातमा मालाका गेडाहरू गन्दै हिँडेका स्थानीय तिब्बती तीर्थयात्री महिला भेटिए । मैले फटाफट फोटो खिच्दा उनीहरू झनै हाँसेर अगाडि बढे ।
हामी दार्चेन नजिक पुग्दै थियौँ । थकाइ लागे पनि केही बेरमा होटल पुगेर आराम गर्न पाइने सोचले हाम्रो स्पिड घट्न पाएको थिएन । त्योभन्दा पनि कैलाश कोरा पूरा हुँदै गरेको खुशीले शरीर र मन दुवै निकै हलुका हुन थालिसकेको थियो ।
हाम्रा कतिपय सहयात्री अझ पनि घोडामा थिए । बाटामा केही तिब्बती भेटिए, जो दुई खुट्टा र दुई हात टेकेर घस्रँदै थिए । उनीहरूका दुवै खुट्टामा मात्र होइन, हत्केलाहरूमा पनि चप्पल थिए । साँच्चैको कैलाश कोरा विधि रहेछ त्यो ।
दार्चेन पुग्दा घाम पहेँलिन सुरु गरिसकेको थिएन । तर हाम्रो कैलाश कोरा पूरा भइसकेको थियो । यात्राको उद्देश्य सकुशल पूरा भइसकेको थियो ।
टुर लिडर बालाले प्रत्येक यात्रीको साहस र समर्पणको कथा कहँदै सबैलाई एकएक गरी खादा ओडाएर अभिनन्दन ग¥यो । यात्रीहरू खुशीले बोल्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरूका आँखा हर्षका आँशुले टम्म थिए ।
होटलबाहिर चिटिक्कका क्युरियो सपहरू थिए । एउटा पसलमा महिला यात्रीहरू झ्याम्मिरहेका थिए । मैले परिवार सम्झेँ र दार्चेनको चिनो किन्न म पनि त्यहीँ पुगेँ । सहयात्री दिव्यानीले आफूले मनपराएको सामान किन्न केही पैसा नपुगेको भन्दै पसल्नीले सुन्ने गरी मसँग सापट मागी ।
‘ठीकै छ । नपुगे म हालिदिउँला’, मैले भनेँ ।
तर उसले सुनेको नसुन्यै गरी ।
निकै जिद्धी गरेर उसले मनपराएको सामान आफ्नै भाउमा किनेरै छाडी ।
दिव्यानी र उसका साथीहरू होटल फर्के । डिनर टाइममा उनीहरूसँग फेरि भेट भयो । सबका अगाडि दिव्यानीले मलाई पाठ पढाई, ‘पसलमा यदि कुनै केटीले सामान किन्दै गर्दा पैसा नपुगेको भनी भने कहिल्यै आफूसँग पैसा छ भन्न हुन्न, बरु सीधै छैन भन्नुपर्छ । त्यो मूल्य घटाउने ट्रिक हो ।’
‘तिमीलाई त्यति त थाहा होला भन्ठानेर मैले तिमीसँग पैसा सापट मागेको थिएँ । तर तिमी सोझो मात्र होइन, मूर्खसमेत रहेछौ’, उसले थपी ।
दिव्यानीका ‘दिव्यवाणी’ सुनेपछि यात्रीहरू मलाई हेरेर हाँसिरहेका थिए ।
‘समृद्धिका लागि ‘जादुको छडी’ सरकारले चिन्न सकेको छैन’